DAAWO VIDEO:- Shir jaraa'id uu maanta qabtay Sheekh Axmed Madoobe oo kaga hadlay arimo badan oo xasaasi ah.
on September 04 2013 Gudoomiyaha maamulka KMG ee Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Sheekh Axmed Madoobe) oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxa uu ka hadlay arimo badan oo aad xasaasi u ah.
Sheekh Axmed Madoobe ayaa marka hore ka hadlay wadahadalkii ay dhawaan la galeen dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana uu sheegay in wadahadaladaasi uu guul kusoo dhamaaday islamarkaana halkaasi lagu kala saxiixday heshiis rasmi ah.
Wuxuu sidoo kale mahad aad u balaaran u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dalalkii kale ee ku dadaalay heshiiska la gaaray inuu suurto galo islamarkaana uu aad ugu faraxsan yahay arinkaas.
DAAWO SHIRKA JARAA'ID EE SHEEKH AXMED MADOOBE
Sheekh Axmed Madoobe ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dhawaan uu tagi doono magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in booqashadiisa ay noqon doonto mid looga hadli doono arimaha maamulka uu isaga gudoomiyaha ka yahay.
Wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu maalmaha fooda inagu soo haysa uu kusoo wajahan yahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose, isagoona sheegay in maamulkiisa ay si wanaagsan usoo dhaweeyn doonaan, si loo sii ambaqaado arimaha maamulka KMG ee Jubba.